The Endless Love ( 2017 ) - Myanmar Asian TV
The Endless Love ( 2017 )
2016 မှာ Whirlwind Girl2ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးမှာ တောင်ကိုရီးယား စတား
Ji Chang Work နဲ့ အတူတူ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Yuexi An ဆိုတဲ့ မင်းသမီးလေးကို မှတ်မိကြအုံးမယ်ထင်ပါတယ်။
ချစ်စရာ အသွင်အပြင်နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သရုပ်ဆောင် တက်တဲ့ Yuexi An ကတော့
Chen Ruo Xuan ဆိုတဲ့ မင်းသား နဲ့ တွဲဖက်ပြီး သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
Chen Ruo Xuan ကတော့
2017 မှာလဲ Evil Minds2ဇာတ်လမ်းတွဲမှ မာနကြီးတဲ့ သူ တစ်ယောက်ရဲ့ စတိုင်မျိုး နဲ့ သရုပ်ဆောင်ပြီး အောင်မြင် ကျော်ကြားခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။
ဒီကားတော့မှာ Chen Ruo Xuan ကတော့ ဂုရန်ဘိုင်ဆိုတဲ့ မင်းသားနေရာမှာ ရိုးအတဲ့ ပုံစံနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားပြီး
Yuexi An ကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သွက်သွက်လပ်လပ်နဲ့ ချစ်စရာ အသွင်အပြင်လေးနဲ့ လုယုရန်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ
ဂုရန်ဘိုင်က ထူးချွန်တဲ့ လူငယ်ပန်းချီဆရာလေးပေါ့…
ရုတ်တရက် သူ့မှာ color blind ဖြစ်သွားတဲ့အခါ
ယုရန်ကို တွေ့လိုက်တိုင်း ထူးထူးဆန်းဆန်း ခဏတော့ ပြန်ကောင်းလာတယ် ….
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ အာ့မှာစတာပေါ့… 😁😁
(ပြောချင်တာကတော့ ရင်ထဲမှာ စွဲနင့်အောင်ချစ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ကိုပဲ
ချစ်သူရဲ့ အလှကို မြင်မိတာမျိုးပေါ့)
တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေတတ်တဲ့ ဂုရန်ဘိုင်တစ်ယောက် စော်လေးကို လိုက်ကပ်တဲ့အခါ အလွဲလေးတွေ….
ကြည့်ကြည့်ပါ အကြိုက်တွေ့စေရမယ် ပြီးတော့ Viki မှာ 9.6 နဲ့ Mydramalist မှာ 7.7 အထိ ရှိနေတော့….
ဇာတ်လမ်း လေးကိုက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ဆိုတော့ ဒီဇာတ်ကားလေးကို ကြည့်မိပြီး
ရင်ခုန်သံတွေ ရပ်တန့်သွားအောင်တောင် ဖန်တီးထားကြောင်း
Translator : May Phyu Zin
File Size : 420 MB -450MB